OnePlus 7 Pro: endri-javatra, tsipiriany, vidiny ary misy | Androidsis
Efa niresaka momba izany isika OnePlus 7, ny kinova mahazatra an'ny duo voalohany an'ny mpanamboatra sinoa izay manana Pro variant ihany koa, izay ilay horesahintsika manaraka.
El OnePlus 7 Pro Izy io dia terminal mandroso kokoa noho ilay efa voalaza ary manana endrika premium ihany koa, na eo an-damosiny na eo alohany. Izy indray no manatsara ny fizarana sasany, toy ny écran, izay tsy isalasalana fa mahatonga azy a safidy mety indrindra ho an'ireo izay mitady izay tsara indrindra amin'ny lafiny rehetra.
1 OnePlus 7 Pro manasongadina sy famaritana
OnePlus 7 Pro manasongadina sy famaritana
Toy ny OnePlus 7, dia hanomboka amin'ny famoahana ny zava-drehetra momba ny efijery OnePlus 7 Pro, izay, araka ny vinavina, dia manana tahan'ny hafanana 90 Hz, zavatra manolotra traikefa tsara kokoa rehefa mivezivezy amin'ny menus, hoy ny orinasa iray ihany.
Amin'ity dia tsy maintsy ampidintsika ny 'Night Mode 2.0', fiasa izay manova sy mampihena ny famirapiratan'ny efijery AMOLED izay mahatratra hatramin'ny 0.27 nits. Hiaro ny mason'ilay mitondra amin'ny hazavana ambany izany, toy ny amin'ny alina.
Ankehitriny, miresaka ny mombamomba ny efijery dia manana ny Teknolojia 'Fluid AMOLED' ary diagonal 6.67 santimetatra, habe mihoatra ny an'ny tontolon'ny OnePlus 7. Ity, ho fanatsarana lehibe, dia manana vahaolana avo lenta kokoa, dia ny QuadHD + 3,120 x 1,440 piksel, ary ny tahan'ny lafiny 19.5: 9 mahavariana. Izy io koa dia manana sisiny miolakolaka ary mampiasa ireo tombony omen'ny Corning Gorilla Glass. Izy io koa dia manana haavon'ny pixel 516 dpi.
El Snapdragon 855 io koa dia hita ao amin'ity modely ity, ary koa ny 6, 8 na RAM 12 GB tsara, arakaraka ny kinova azonao. Na izany aza, ny configurations habaka fitehirizana anatiny dia mbola misy ihany hitantsika ao amin'ny OnePlus 7, izay ny 128 sy 256 GB, ny teknolojia UFS 3.1.
Ny fizakan-tena dia iray amin'ireo teboka matanjaka ao aminys, satria manana haavo 4,000 mAh izay manararaotra ny teknolojia famaranana haingana 30 W Warp Charge, izay afaka mameno ny fitaovana haingana kokoa noho izay nomena ny maodely mahazatra.
Ny faritra sary dia misy fakan-tsary telo aoriana, raha tokony ho avo roa heny, toy ny mitranga ao amin'ny OnePlus 7. Ity dia sensor an'ny Sony IMX586 lehibe 48 MP (f / 1.7) miaraka amina lens 6P miaraka amin'i OIS sy EIS, sensor 8 MP telephoto sensor (f / 2.4 ) mba hanomezana zoom optika 3x sy solosaina 16-degre 2.2 MP (f / 117). Ity maodely ity dia manohana ny fandraisam-peo 4K amin'ny zana 60 isan-tsegondra, manana flash LED indroa, mampiditra halavany hatramin'ny 11 mm ka hatramin'ny 78 mm, manana teknolojia 'Pixel Binning' ary miaraka amina solomaso plastika misy singa 7.
Mandritra izany fotoana izany, ho an'ny selfies dia mirehareha amin'ny fakantsary pop-up 471 MP Sony IMX16 miaraka amina f / 2.0 sy HDR fanohanana, izay mitovy amin'ny maodely tany am-boalohany, fa tsy amin'ny laharana. Ity dia azo ahetsika hatrany amin'ny 300,000 nefa tsy mijaly noho izany, hoy ny fanazavan'ilay orinasa.
Amin'ny lafiny iray, mampiditra endri-javatra maro sy famaritana ny OnePlus 7, toy ny stereo mpandahateny, ny fanohanana Dolby Atmos, ary ny rafitra fiasa Android Pie ambanin'ny kinova farany an'ny OxygenOS,
SCREEN AMOLED 6.67 »QuadHD + 3.120 x 1.440 teboka (516 dpi) / 19.5: 9 / Corning Gorilla Glass
CHAMBERS Aoriana: Sony IMX586 48 MP (f / 1.7) 7 µm 0.8P lens ary OIS + 8MP (f / 2.4) miaraka amin'ny zoom optika 3x + 16 MP (f / 2.2) 117º zoro malalaka. Double LED flash / Frontal: Sony IMX471 16 MP (f / 2.0) 1 µm
BATERA 4.000 mAh miaraka amina haingam-pandeha 30-watt Warp (5 volt / 6 amps)
ASA hafa Mpamaky ny dian-tanan-tànana / Famantaran-tarehy / USB-C (USB 3.0 Gen 1) / Fanamafisam-peo / Fanafoanana ny tabataba / Fanohanana ho an'ny Dolby Atmos / SBAS / Alert Slider
DIMENSION SY lanjan'ny 162.6 x 75.9 x 8.8 mm ary 206 g
Ny OnePlus 7 Pro dia tonga amin'ny safidy RAM sy safidy fitadidiana anatiny. Misy karazany efatra ity maodely ity, ary izy rehetra dia hamidy amin'ny andro iray ihany, dia ny 21 Mey, ankoatry ny variana 8GB RAM sy 256GB ROM, izay havoaka amin'ny volana Jona.
Ireto ny vidiny:
OnePlus 7 Pro (6/128 GB) Mirror Grey: 709 euro.
OnePlus 7 Pro (8/256 GB) Mirror Gray sy Nebula Blue: 759 euro.
OnePlus 7 Pro (12/256 GB) Nebula Blue: 829 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » OnePlus 7 Pro: ilay sainam-pirenena vaovao miaraka amin'ny zava-drehetra ary tonga hisarika ny saina